Izinsizakalo zeVisa - Abasenzi besigidi
Usizo lweVisa lwe
Sikhulisa amaklayenti ethu ngokubekezela okuningi nozwela.
Sinikezela ngezixazululo ezenziwe ngezifiso zabantu, imindeni, amabhizinisi amancane, izinkampani ezinkulu zomhlaba ezisebenzela wena.
Yabelana ngesidingo sakho nathi futhi sizokuqondisa ukuthi kanjani, emhlabeni wonke.
Izinsizakalo zethu eziphambili
Izinsizakalo zethu Eziyinhloko Ezihlobene Nosizo lweVisa
Khetha Izwe ngezinsizakalo ze-Visa
Amazwe aphezulu we-Visa
Konke Okudingayo Ukuze Ukwazi
Insiza Yengezwe Inani
Njengomuntu noma umnikazi noma uthishanhloko wenkampani ezimele noma eyinkampani, wonke umuntu akaphonswa inselelo hhayi ngokuphatha imisebenzi yansuku zonke, kepha, ngokuhlangana nokuqinisekisa impumelelo yesikhathi esifushane neyesikhathi eside yenkampani yabo. Kepha njengoba izindleko zokwenza ibhizinisi ziya ngokwanda futhi nezidingo zokuhambisana nazo zidala izinselelo ezinkulu kakhulu zokusebenza, ungahle ushiywe uzibuza ukuthi uzoqhubeka kanjani nokusinda - ungasasho ukuchuma - ngalesi sikhathi esisha.
Isinyathelo ngesinyathelo Inqubo - Ukusuka ekuqaleni kuya empumelelweni
Isinyathelo 1: Khomba izidingo zomuntu ngamunye / zomndeni / zebhizinisi.
Isinyathelo 2: Ukukhethwa kwamathuba / amathuba amahle kakhulu wokufeza ngempumelelo izinjongo nezinhloso.
Isinyathelo 3: Kuthunyelwa izinketho ezinhle kakhulu zokuvunywa.
Isinyathelo 4: Uma kungenzeka, kubhekwe ukuvakasha ezweni, uma kungenjalo akukhona.
Isinyathelo 5: Funda ngokwenzeka.
Isinyathelo 6: Ukubalwa kwezimali kanye nezeluleko zentela, uma kusebenza.
Isinyathelo 7: Ukubuka konke nokuchazwa okuningana kwamathuba okungenzeka.
Isinyathelo 8: Ukwengamela inqubo.
Isinyathelo 9: Ukulungiselela nokuhambisa kuziphathimandla ezifanele.
Isinyathelo 10: UKUPHUMA!
Abezinye izizwe abavakashela e-Argentina kwezokuvakasha kanye nezinjongo zebhizinisi banikezwa imvume yokuthatha izinsuku ezingama-90, futhi abadingi ukufaka isicelo se-visa kusenesikhathi. ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka neNxusa Lase-Argentina noma i-Consadors ngaphambi kokuthatha uhambo noma yiluphi olunye ulwazi olutholakala kuMnyango Wezangaphandle Wezangaphakathi.
Ungafaka isicelo sevisa lesi kuphela uma ubhalise esikhungweni semfundo e-Argentina futhi semukelwe ngumnyango wezifiki wase-Argentina. Ngokuvamile kuvumelekile kuze kube ukuthi izifundo ozithathayo seziphele ngokusemthethweni, futhi azikwazi ukuvuselelwa.
Isivumelwano Visa Abasebenzi
Le Visa ingeyabantu abahlela ukuhlala e-Argentina futhi basebenzele inkampani yase-Argentina ebhalisiwe nenkonzo yezokufika, futhi egunyazwe ukuqasha abasebenzi bakwamanye amazwe. Esikhathini esiningi, ungasifaka isicelo sale visa ngaphambi noma ngemuva kokungena ezweni.
Noma ngubani ongafakazela imali engenayo eqinisekisiwe yanyanga zonke yama- $ 8,500 2,200 ARS alinganiselwa ku- $ XNUMX USD, futhi aqinisekise ukuthi idiphozithi yakhe kwi-akhawunti yasebhange lase-Argentina angafaka isicelo salolu hlobo lwe-visa. Uma nje umfakisicelo ekwazi ukwethula imibhalo efakazela ukuthi imali engenayo isazoqhubeka lapho behlala e-Argentina, bangafaka isicelo se-visa yezezimali.
Ukufaka isicelo se-visa Yempesheni, njenge-visa yezezimali, umuntu udinga ukuthola imali encane yokufaka isicelo se-visa Yempesheni udinga ukuthi ukhombise imali engenayo yanyanga zonke yama- $ 8,500 2,200 ARS (cishe ama- $ XNUMX USD). Imali kufanele ifakwe kunoma yiliphi ibhange lase-Argentina.
Imibhalo evame ukubuzwa lapho ufaka isicelo yile:
Iphasiphothi eneqiniso okungenani izinyanga eziyi-6 ngemuva kosuku lokufika
Ifomu lesicelo eligcwalisiwe
Izithombe ezine ezisanda kwenziwa zosayizi ojwayelekile
Ukubhukwa kwamathikithi ohambo olujikelezayo
Ukubhukelwa kwehhotela noma incwadi yesimemo evela kumngane noma e-Argentina ehlala umndeni
Isheke lokukhokha lemali yesicelo
Ubufakazi bezimali uma umenzi wesicelo ekwazi ukuzisekela yena
Eminye imibhalo ongacelwa ngayo ifaka: isitifiketi sokuzalwa, isitifiketi sokuqala somshado, isitifikedi sokuqala sesehlukaniso (uma kukhona), noma yimiphi imibhalo yokushintshwa kwegama, njll. Yonke le mibhalo kufanele ibhalwe phansi futhi isetshenziswe ezweni lase ukukhishwa kwabo, bese kuhunyushelwa olimini lwaseSpain futhi kube semthethweni yinkantolo yase-Argentina.
Zonke izakhamizi ze-European Union
Abaphethe amaphasiphothi ala mazwe alandelayo kumele basebenzise isitifiketi sokuhamba esikhishwe yi-Argentina esikhundleni se-visa lapho behamba:
ISahrawi Arab Democratic Republic
Kufanele futhi kukhulunywe ukuthi kubantu baseBolivia, eBrazil, eColombia, eChile, e-Ecuador, eParaguay, ePeru, e-Uruguay naseVenezuela inqubo yokuthola imvume yokuhlala okwesikhashana ilula kakhulu, ilula futhi ayinzima. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa i-Argentina Consate yaphesheya noma e-Argentina. Imvume ihlala iminyaka emibili, futhi ingavuselelwa.
Sinikeza ngezixazululo ezahlukahlukene ngaphansi kophahla olulodwa, ukubambisana okungu-1 kuzo zonke izidingo zakho zokukhula kwasendaweni noma zomhlaba.
Ngaso sonke isikhathi lapho uphendula imibuzo yakho, ukuxhasa ezinhlosweni nasizifisweni zakho, kukusiza wonge isikhathi nemali.
Izidingo zawo wonke umuntu azifani, yingakho, sihlala sikwenzela izisombululo ezenzelwe wena, sendlela yakho yokukhula emhlabeni jikelele.
Imali ekhokhelwa izinsizakalo zethu iyancintisana kakhulu ngaphandle kwezindleko ezifihliwe, ezisebenza kubo bonke, noma ngabe uyinkampani eyedwa noma encane, ephakathi nendawo noma enkulu.
Eminyakeni edlule sisebenza nabantu, imindeni nezinkampani, sithuthukise ulwazi olusemqoka ngakwinkonzo ebanzi yezinsizakalo, emazweni aphesheya.
Sineqembu labasebenzi abanolwazi, izinhlangano nababambisene nabo ukuhlinzeka ngolwazi oluningi kumakhasimende ethu.
Singabalingani, abahlinzeki Bezinsizakalo, Abameli, ama-CFP, ama-Accountants, ama-Realtors, Ochwepheshe Kwezezimali, Ochwepheshe Bokufika kanye nabantu abanekhono kakhulu, abantu abasuselwa kumiphumela.
Lapho sibhekene nesinqumo esinzima asisoze siyekethise amanani ethu nezimiso zethu. Senza okulungile, hhayi okulula.
Sikhonza abantu ngabanye, imindeni kanye nezinkampani zomhlaba wonke, yingakho zingakhuphula futhi zikhuphule ukukhula kwakho emhlabeni jikelele.
Silapha ukwenza lula ukuthuthwa kwakho, ukukhula, ukunwetshwa kanye nezidingo ngokunikeza iphuzu elilodwa lokuxhumana.
Ukuba khona kwethu okuhlukile ezimakethe zomhlaba jikelele kusinikeza, ulwazi lwendawo olusivumela ukukunikeza iplatifomu yokusekelwa ephelele.
Imisebenzi Yezokufika: 22156.
Ukusebenza Kwezinkampani: 26742.
Abasebenza izigidi ngezigidi ngokubambisana kwethu namazwe omhlaba kanye nobudlelwano ne-Professional CFA, Ama-accountants, ama-Associates wezezimali, iThimba labaThunyeli Bokufika, balawula iphothifoliyo enkulu kakhulu yabakhokhela intela kanye nezinhlangano zebhizinisi zamazwe omhlaba ezisebenza cishe kuzo zonke izindawo ezinamakhasimende aphindaphindayo nokunakekela isikhathi sethu eside ubudlelwano namakhasimende ethu iminyaka eminingi kangaka ngenxa yenkonzo yethu emihle, uzwela namanani wokuncintisana.
Sinikezela ngezinsizakalo zokubalwa kwemali kanye / noma nezinsizakalo zokucwaninga ezinhlanganweni zamabhizinisi aphesheya ezifakwe kumandla ashiwo ngenhla:
Uma ubheke phambili i-Accounting and Auditing Services kunoma yiliphi izwe, elingafakwanga ohlwini lwewebhusayithi yethu sicela uxhumane nathi ngqo nge-imeyili.
info@millionmaker.com Noma shayela I-Austria +43720883676, I-Armenia +37495992288, ECanada +16479456704, EPoland +48226022326, I-UK +442033184026, I-USA +19299992153okeraXNUMX
Asisekeli noma sinikeze ngenkonzo yethu ezigabeni / izigaba ezichazwe ngezansi kubantu ngamunye kanye / noma amabhizinisi:
Noma iyiphi insiza engaholela ekusetshenzisweni kabi kwamalungelo abantu noma isetshenziselwe ukuhlukunyezwa.
Ukuhweba, ukusabalalisa noma ukukhiqiza izingalo, izikhali, izinhlamvu, ama-mercenary noma izinkontileka zenkontileka.
Ukuhlolwa kobuchwepheshe noma imishini yokubhidliza noma ukuqina kwemboni
Noma yiziphi izinto ezingekho emthethweni noma zobugebengu noma zabantu abathile abamnyama abhalwe phansi komthetho wanoma yiliphi izwe.
Izinto eziyingozi noma eziyingozi zemvelo, amakhemikhali noma izinto zenyukiliya futhi ezibandakanya, imishini noma imishini esetshenziselwa ukwenza, ukuphatha noma yokulahla lezo zinto.
Ukuhweba, ukugcina noma ukuthutha izitho zomuntu noma izilwane, ukuhlukunyezwa kwezilwane noma ukusetshenziswa kwezilwane kunoma yikuphi ukuhlola kwesayensi noma komkhiqizo.
Ama-ejensi wokutholwa kwabantwana, okubandakanya izinqubo zokuzala zabazali noma enye indlela yokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu;
Izinkolo zenkolo nezinhlangano zabo zosizo.
Imisebenzi yebhizinisi, eye yenziwa yimithetho nemitheshwana yezwe yokwakhiwa kwebhizinisi ngaphansi kwamalayisense futhi eyenziwa ngaphandle kokuthola ilayisense.
Iziphakamiso Zokuhlela Okuyisu
Ukuhlelelwa kohlelo lokufudukela kwamanye amazwe okungakusiza ufeze izinhloso zakho zokuhamba emhlabeni jikelele nangesifiso esisheshayo nesingabizi.
Ukubamba Izandla Nokubekezela
Siyaqonda kahle ukuthi inqubo yonke ingeyakho nekusasa lomndeni wakho futhi uzodinga ukuholwa okuningi nokubanjwa ngesandla kuyo yonke inqubo. Ungakhathazeki ukuthi kukhona thina!
Siyaqonda ukuthi ukufuduka kwesinye isikhathi kuvame ukuba yinkambu eyinkimbinkimbi kakhulu futhi sikholwa ukuthi ubudlelwano beqiniso buhlanganisa nokwabelana ngolwazi. E-Million Makers sinikezela ngamakhasimende ethu ukuqeqeshwa ngezihloko ezahlukahlukene zokufuduka. Sisebenza ngokubekezela kakhulu nabathengi bethu.
Ngezikhathi ezithile sihlangana neklayenti lethu noma sibe nomhlangano wevidiyo, ngokuya ngokutholakala kwaso. Le mihlangano iyizinhloso zenkampani, izinqubomgomo noma izindlela ezingathinta uhlelo lwazo lokuya kwelinye izwe, ukucubungula nokunquma okungalungiswa kohlelo. Asikhokhisi lutho olungeziwe kulokhu kuhlangana kanye nemihlangano.
Isiqondisi Esiwusizo futhi Amaprosesa asekelwe